Helen Keller အကြောင်း ( + မိဘတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေး အတွက် ရှိထားသင့်တဲ့ ဆရာကောင်း အကြောင်း ) ဆယ်တန်း ကလေးတွေ အတွက် Helen Keller အကြောင်း ပြောပြရင်း မိဘတွေကိုယ် ပါ ( ကိုယ့်ကလေး ပို တိုးတက်ဖို့အတွက် ) သတိထားစေချင်တဲ့ အချက်လေးတွေ ထည့် ဆွေးနွေးပေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Live...
ဘဝမှာ လမ်းပျောက်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ လူများစု မေ့နေတာလေး တစ်ခု
ဘဝမှာ လမ်းပျောက်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ လူများစု မေ့နေတာလေး တစ်ခု ရှိတယ် ? ? ကိုယ့်ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သေချာ မသတ်မှတ်ထားမိတာပါ ။ အဲ့လို ကိုယ့် ဘဝရဲ့ စံ တန်ဖိုးတွေကို သေချာ မသတ်မှတ်ထားမိတော့ ကိုယ် ဘာကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ သေချာသိဖို့လည်း ပို ခက်သွားတယ် ။ ကိုယ်...
ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက် လူငယ်များ အတွက် – ၄
၄ ။ ဘဝ တွေ … ဘဝ တွေ … ထုံးစံအတိုင်း ညီလွင် ကျွန်တော့် ဆီ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ စကားဝိုင်းလေး ဆက်ဖြစ်ပြန်တယ်။ " အကို တခြားရော အကြံပေးချင်တာ လေးတွေများ ရှိသေးလားဗျ ။ အကို့ ဆီက ရသလောက် ယူသွားချင်လို့ပါ ။ " " ဟားဟား ။ ညီကတော့ လုပ်ပြီ ။ ယူသွားရအောင် အကို့ဆီက...
၃ ။ ကိုယ် ဘယ်လိုလူလဲ ? ညီလွင် တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာပြီး သူသိချင်တာတွေကို အစ ဆွဲထုတ်ပြန်ပါတယ် ။ " အင်း ဒါက ဒီလို ရှိတယ်ညီရ ။ အရင်က အကိုတို့ ဆွေးနွေး လိုက်တဲ့ အဓိက အချက် ၂ ချက် ရှိတယ်လေ ။ " အကို ၊ အကို အရင် ရေးဖူးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပါ ဆိုတာကို ရော...